Hogaamiyaha Filimka DANGAL Aamir Khan Oo Farriin Qalbiga Taabaneysa La Wadaagay Taageereyaashiisa | Filimside.com – Wararkii Ugu Dambeeyay Aflaanta Hindiga	Monday, February 20th, 2017	HOME
Hogaamiyaha Filimka DANGAL Aamir Khan Oo Farriin Qalbiga Taabaneysa La Wadaagay Taageereyaashiisa
Jan 11, 2017 - 3 Jawaabood	Waxaa Qoray: Super Admin Taariikh: 11, January 2017
Atooraha caanka ah ee shirkadda aflaanta dalka India ee Bollywood Industry Aamir Khan filimka uu hogaamiyaha ka yahay Dangal wuxuu ahaa mid inaba aan caadi aheyn. Wuxuu ahaa filim aad u awood badan kaasoo xambaarsanaa farriin isboorti ah.
Filimkaani wuxuu jebiyey iskoorro hore ugu yaallay Box Office halka uu dhigay iskoorro cusub. Aamir Khan ayaana go’aansaday inuu u mahadceliyo shaqsi kasta oo taageeray filimkiisa kana caawiyey inuu gaaro derejadaas sarre ee All Time Blockbuster.
Bayaan uu soo dhigay akoonkiisa Twitter ayuuna ugu mahadceliyey taageereyaashiisa iyo weliba agaasimihii filimkaan Nitesh Tiwari.
Dangal wuxuu ahaa filim laga sameeyey taariikh nololeedka halyeeyga ciyaaraha musaaricada India Mahavir Singh Phogat kaasoo tababar siinaya labadiisa gabdhood Geeta iyo Babita Phogat, kuwaasoo guulo taariikhi ah usoo hooyey India. Sidoo kale filimkaani wuxuu ahaa mid ka mid ah aflaanta ugu wanaagsan ee uu sameeyey Aamir Khan.
Halkaan hoose ka akhriso bayaankii kasoo baxay Aamir Khan ee mahadcelinta uu ugu jeedeiyey taageereyaashiisa.
Waxaa Aqrisay Warbixintaan (1132)
xasancilmijeeri. says:	11, January 2017 at 4:35 pm	hampalyo again atooraha maamula shirkada baaxada wayn e bollywood ka ..
Darwiish says:	11, January 2017 at 3:18 pm	Atoorah wax kusoo kordhiya bollywoodka ee Mr creator record aamir khan
ĎJŁËÊ AMORE says:	11, January 2017 at 2:13 pm	HAMBALYO atooraha ugu awoodda badan shirkada aflaanta India Mr.perfectionist guulo kale ayan urajaynayaa